2014: Afọ nke Ahụmịhe Ndị Ahịa | Martech Zone
M ga-atụ anya na afọ ọ bụla bụ afọ nke ahụmịhe ndị ahịa maka ụlọ ọrụ anyị ọ bụla, ọ bụghị ya? Amaara m na nke ahụ abụghị aha eluding ka. N'oge gara aga, ekwuru m na ọrụ ndị ahịa bụzi isi ihe na atụmatụ mmekọrịta ọ bụla nke ụlọ ọrụ. N'ihi ọchịchọ ebumpụta ụwa nke ndị na-azụ ahịa ịkekọrịta na nyocha ozi n'ịntanetị banyere ngwaahịa ha na-eji, ụlọ ọrụ ha na-arụ ọrụ yana ụdị ha hụrụ n'anya ma ọ bụ nwee nkụda mmụọ site, usoro mgbasa ozi mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ike mebie ma ọ bụ meziwanye site na nkuzi nke ahụmịhe ndị ahịa. n'ofe Intanet.
Dịka nyiwe mmekọrịta mmadụ na ibe ha na-eto ma na-agbasa na 2014, otu a ka ego ndị ahịa na-ekwu ma na-ekere na soshal midia. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na afọ 2014 bụ afọ nke ahụmịhe ndị ahịa na nke a bụ ihe mgbasa ozi na-agbakwunye. N'ime akwụkwọ ozi a, anyị ga-atụle ihe kpatara ugbu a bụ oge iji jiri ọgụgụ isi na-elekọta mmadụ iji zuo oke ahụmịhe ndị ahịa yana otu ị ga - esi mee ihe.
Mgbanwe na-ejikọta ya na nhọrọ obi nke onye na-azụ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa na-eme ozugbo ha tụkwasịrị obi na ha na-eme mkpebi ịzụta dị mma. Ebe ọ bụ na ọrụ ndị ahịa bụ ọnụọgụ 1 nke ntụkwasị obi, ọ nweghị nsogbu na ị ga-enwerịrị ahụmịhe nke ndị ahịa iji rute, chọta ma dọta ndị ahịa n'ịntanetị.
Tags: aka ndi ahiaahụmahụ ahịaahịa ebumnucheezi ndị ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịanzubenewbrandanalyticsnjikọ aka n'ịntanetịndị na-enyocha ntanetịmmetụta ntanetịtụkwasị obi